पैसाका लागि यी महिलाले संसारलाई चकित बनउने कम गरिन , आखिर क गरिन त ?? – Taja Khawar
पैसाका लागि यी महिलाले संसारलाई चकित बनउने कम गरिन , आखिर क गरिन त ??
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २१, २०७८ समय: १९:२१:०५
बीबीसी : मानिसले पैसा कमाउन अनेकौ उपाय अपनाउने गरेका छन् । कसैका अनौठा शो’ख पनि हुन्छन् । जसले मानिसलाई अचम्म बनाउँछ । पैसा कमाउन एक जना म’हिलाले अपनाएको उपायले प्र’हरीलाई पनि चकित् बनाएको छ ।
ज्वाई अष्ट्रेलियावाट आएको केही दिनमै छोरीले घर छोडेर हिँडेपछि आमा रुँदै मि…
प्र’हरीले प्रयोगमा आइसकेका ३ लाख २५ हजार क ण्ड म बरामद गरेको छ । यी क न्ड मलाई पानीमा धोएर नयाँ क ण्ड म भन्दै बेच्ने गरिएको थियो । यो क ण्ड म देशको दक्षिणी प्रानत बिन्ह दुओङस्थित एक गोदाममा एक दर्जन ब्या’गमा भरेर राखिएको थियो ।
भियतनामको सरकारी टिभी च्यानल विटीभीको रिपोर्टअनुसार प्र’हरीले क न्ड मले भरिएका यी ब्याग सहित म’हिलालाई प’क्राउ गरेको हो ।
जसको वजन ३ सय ६० किलो छ । यस गोदामका मा’लिकले उनले अज्ञात ब्यक्तिवाट प्रयोगमा आइसकेका क ण्ड म किनेर फेरी बेच्ने गरेका थिए ।
त्यसलाई धो’इपखाली गरेर बेच्ने गरेको प्र’हरी अ’नुसन्धानवाट खुलेको छ ।
प’क्राउ परेकी एक महिलाले दिएको बयानअनुसार प्रयोग भइसकेका यी क ण्ड मलाई पहिलो उ म्लि एको पानीमा हा ल्ने गरिन्थ्यों, त्यसपछि सुकाइन्थ्यों ।
महिलाका अनुसार त्यसपछि यस क ण्ड मलाई का’ठको लि ङ्गमा राखेर फेरि पुरानै आकार दिएर नयाँ जस्तै बनाइन्थ्यो । त्यसपछि फेरि प्या’केटमा भरेर बेच्ने गरिन्थ्यों । टिभी च्यानलका अनुसार प्रयोगमा आएका यस्ता कति क ण्ड म फेरि बिक्री भयो भन्ने विषय अहिले खुलेको छैन । महिलाका अनुसार उनले जति किलो क ण्ड म बनाउथिंन्, त्यहीअनुसार पैसा आउथ्यों ।
झापाको भद्रपुर नगरपालिका–२ मा रहेको कि’च्चकबध प्र’हरी चौकीका प्रमुख एवं प्र’हरी सहायक निरीक्षक महादेव ठाकुरको च’ट्याङ लगेर मृ’त्यु भएको छ ।
जिल्ला प्र’हरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी राकेश थापाका अनुसार सोमबार राति १०ः५५ बजेतिर गस्तीमा रहेको अवस्थामा उहाँ च’ट्याङ लागेर घा’इते हुुनुभएको थियो ।
तत्कालै भद्रपुरको ओमसाइ पाथिभरा अस्पताल पु¥याउँदा चि’कित्सकले मृ’त्यु भइसकेको जानकारी गराएका थिए ।
मृ’तक प्र’हरी सहायक निरीक्षक ठाकुर ४७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
भा’रतसँगको सीमा नजिक रहेको उक्त अस्थायी प्र’हरी चौकीको टोली साइकल गस्तीमा निस्किएको थियो । हावाहुरी र भारी वर्षासँगै परेको च’ट्याङले ठाकुरलाई लागेको थियो ।
गस्तीमा ख’टिएका अरु प्र’हरीहरु सुरक्षित नै छझापाको भद्रपुर नगरपालिका–२ मा रहेको किच्चकबध प्र’हरी चौकीका प्रमुख एवं प्र’हरी सहायक निरीक्षक महादेव ठाकुरको च’ट्याङ लगेर मृ’त्यु भएको छ ।
भा’रतसँगको सीमा नजिक रहेको उक्त अस्थायी प्र’हरी चौकीको टोली साइकल ग’स्तीमा निस्किएको थियो । हावाहुरी र भारी वर्षासँगै परेको चट्याङले ठाकुरलाई लागेको थियो । गस्तीमा ख’टिएका अरु प्र’हरीहरु सुरक्षित नै छन् ।
Last Updated on: May 4th, 2021 at 7:21 pm
१७७८ पटक हेरिएको